IPSL kulindeleke icacise ngekusasa leHighlands Park
UPETER Shalulile weHighlands Park okuvela ukuthi kuthanjiswe nagye ukuze kudayiseke leli qembu kwiTS Galaxy. Lapha umakene noSurprise Ralani weCape Town City Isithombe: TWITTER/Highlands Park
KULINDELEKE ukuthi iPremier Soccer League (PSL) iqede ukuqagela ngeHighlands Park okuvela ukuthi isitifiketi sayo sokudlala kwiPremiership sithengwe iTS Galaxy ebiyibambe kwiGladAfrica Championship.
Ngokusho komthombo weSolezwe ongashayi eceleni, ngoMsombuluko nangoLwesibili uTim Sukazi okunguyena othenge iHighlands, nethimba asebenza nalo bebevalelene emihlanganweni kulungiselelwa isizini ka-2020/21 eqala ngenyanga ezayo.
Udaba lukaSukazi lokuthenga isitifiketi seHighlands Park iqale ukuvela ezinyangeni cishe ezimbili ezedlule . Nokho izinhlangothi zombili beziphika ngalokhu kudayiselana.
Omunye wabaqondisi bamaLions of the North uSinky Mnisi ucashunwe kaningi esola usihlalo weqembu uBrad Kaftel ngokudayisa iqembu engaziswanga.
Ubesabisa ngokuya enkantolo.
Nokho umthombo uthe:" Nakuba ngingaqondi kahle ngasohlangothini lukaMnisi kodwa enginesiqiniseko sako wukuthi isitifiketi seHighlands sekungesaSukazi.
Ngesizini ezayo izobe ibizwa ngeTS Galaxy. Kulindeleke ukuthi iPSL lezi zindaba izethula ngokusemthethweni lingakashoni elanamuhla".
Umthombo udalule nokuthi isitifiketi samaRockets sokudlala kwiGladAfrica sithengiselwe iCape Town All Stars okuyiqembu kwisizini ka-2018/19 uSukazi ayesithenge kulo esokudlala kwiGladAfrica Championship.
Ukwenza isiqinisekiso sokuthi ezikaSukazi kaziyile ukushaya ijika kwiPremiership, umthombo udalulele Isolezwe ukuthi uSukazi uqome ukubuyisa uDan "Dance" Malesela oqophe umlando naleli qembu enqoba iNedbank Cup ngonyaka odlule ekubeni belidlala kwiGladAfrica ebeyaziwa ngeNFD.
Ngemuva kokushaya iKaizer Chiefs ngo-1-0 uhole amaRockers ukuya kwiCaf Confederation Cup.
UMalesela ushiye kwiGalaxy ngasekuqaleni kwalo nyaka ngemuva kokuphikwa imiphumela. U-Esau Mtsweni uzoqhuba nokuba yiphini bese ukuthi uMabhuti Khenyeza obeyinhloko yabaqeqeshi engamele ezinkulisa zeqembu aphinde acije iqembu leMultiChoice Diski Challenge (MDC).
Ingede yeSolezwe iqhuthe yathi uTyron Damons obekwiBidvest Wits uzoqeqesha onozinti.
UThabo Ntethe obengumdlali kwiGalaxy uzoba yimenenja yeqembu.
"Iqembu lisazoqhubeka nokudlala eMpumalanga. Nokho umehluko kulokhu wukuthi liyashiya eKameelrivier Stadium, lifudukela eMbombela Stadium. IKameelrivier isale ngenxa yokungabi nazo izinsiza zePremiership," kubeka umthombo.
IHighlands ebiqeqeshwa u-Owen da Gama iqede isizini edlule isendaweni yesishiyagalolunye kwi-log ye-Absa Premiership.